Handuan | Mpanamboatra fanaka vita amin'ny hazo manokana
Mpanamboatra fanaka vita amin'ny hazo manokana any Chine
Kitapo amin'ny birao
STYLE DESIGN UNIQUE
Ny fomba fanaovan'ny mpanamboatra fanaka manokana dia mizara ho fomba maoderina sy fomba Skandinavianina. Nampiasa akora manta avo lenta hatrany ny orinasa ary voafantina tsara, ary ny fepetra takiana amin'ny asa tanana dia ny hatsarana.
Fanaka namboarina manokana
Fomba endrika tsy manam-paharoa sy maoderina
Ny fizotran-kevitra hentitra dia manome antoka fa hahatratra ny tena voafaritra tsara.
Best Best Modern Cabinet Simple Cabinet North European Home Door Sp Shoe Rack Spece Cabinet Cabinet Cabinet Home Cabinet CoBinet Company Company - Handuan
Ny maoderina tsara indrindra amin'ny alàlan'ny Cabinet European Europeana Door Spo Door Spo dia ny kiraro fitahirizana kiraro Cabinet Cabinet an-tranoNy vokatra dia niantoka fiarovana. Ireo rafitra fiarovana naorina, toy ny fiarovana ny tonon-kery, ny fiarovana be loatra ary ny hidy fiarovana, hiantohana ny asa azo antoka.Handuan tsara indrindra Modern Modern Cabinet Simple Cabinet North European Home Door Shoe Rack Rack Spece Cabinet Cabinet Cabinet Home Shoe Cabinet Complier Company - Handuan
Latabatra kafe miasa
Latabatra kafe miasa.
Amin'ny fikarohana sy fampandrosoana ny vokatra, manana orinasa R sy matihanina ny orinasa
Ekipa & D, mampiditra R& D, famokarana sy varotra.
Ny vokatra avy amin'ny orinasa dia misy andian-dahatsoratra, andiana efitrano fandraisam-bahiny, andiana efitrano fisakafoana, andian-fandriana natambatra ho an'ny ankizy, fonosana hotely injeniera an-trano ary fonosana manokana ho an'ny trano. Ny tena fampiroboroboana dia ny andian-dafitra fanaka ao amin'ny efitrano fatoriana hazo, ao anatin'izany ny fandriana hazo roa sy ny fitafiana hazo. Ny volan'ny orinasa dia mizara ho fomba maoderina sy fomba Nordic. Nampiasa fitaovana manta avo lenta hatrany ny orinasa ary nandalo ny fisafidianana tamim-pitandremana, ny fahalavorariana amin'ny takian'ny asa tanana, miaraka amin'ny endriny tsy manam-paharoa, ny fahaiza-manao kanto ary ny asa fanompoana tso-po, dia nahazo ny fankasitrahan'ny mpanjifa, nahazo endrika nasionaly mihoatra ny folo ary endrika vaovao azo ampiharina patanty, ary nanjary ny famolavolana vokatra indostrialy Leader.
Fiverenana 45 andro
90 andro fitehirizana maimaimpoana
Fizarana tanàna 250
Orinasa mpiasan'ny orinasa
Foshan Handuan Furniture Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2012.
Any Lecong, Shunde, Foshan, Guangdong, Chine no misy azy, izay orinasa mpamokatra fanaka lehibe indrindra manerantany. Atrikasa manara-penitra maoderina lehibe sy vondron'olona mpitantana kalitao tena tsara, ankehitriny dia manana fototra famokarana maoderina 10.000 metatra toradroa, ny mpiasa efa misy olona 100, ny orinasa dia manolotra marika malaza eto an-toerana sy ireo fitaovana fampiroboroboana avo lenta mba hiantohana ny fiarovana ny kalitaon'ny vokatra Raha jerena ny fepetra voajanahary, ny orinasa dia manana R matihanina sy faran'izay tsara
Ekipa & D amin'ny fikarohana sy fampandrosoana ny vokatra, ary ekipa mpivarotra matihanina ary rafitra marketing tonga lafatra amin'ny varotra, mampiditra R& D, famokarana sy varotra.
Ny volan'ny orinasa dia mizara ho fomba maoderina sy fomba Nordic. Ny fanaka efi-trano ambony hazo dia misy farafara hazo sy fitafiana vita amin'ny hazo. Nampiasa akora manta avo lenta hatrany ny orinasa ary voafantina tsara. Ny fepetra takiana dia ny hatsarana, ary ny endriny tsy manam-paharoa, ny fahaiza-manao kanto ary ny serivisy tso-po dia nahazo ny ankamaroan'ny mpanjifa nankafy, nahazo ny patanty famolavolana modely maodely folo ho an'ny firenena, ary nanjary mpitarika ny famolavolana vokatra indostrialy.
Manaraka ny firehan-kevitry ny ergonomia, ny fahasalamana ary ny fiarovana ny tontolo iainana.
Farafara ambony ambony fandriana miaraka am-pandriana fatoriana fatoriana fandriana zaza farafara fandriana zaza fandriana tsotra farafara fandriana bunk multifunctional mpanamboatra fandriana
Handuan ao amin'ny No.19, Kangtai South Road, block B, Shatou Industrial Park, Jiujiang Town, Distrikan'i Nanhai, Foshan City vokatra lehibe Farafara ambony misy farafara fandriana zaza farafara fandriana zaza fandriana fandriana zaza fandriana tsotra farafara fandriana multunkunctional fandriana. Handuan dia amboarina amin'ny fampiasana ny tanjaka ara-teknika matanjaka, fitaovana mandroso. Izy io dia manana lamba matanjaka sy mateza mitazona famirapiratana sy endrika mba hiantohana ny fijerena tsara ny efitrano fandriany sy ny torimaso mahafinaritra amin'ny alina. Handuan dia notsapaina tamin'ny fahamendrehana dimensional, ny fahombiazany ary ny fahamainan'ny loko mba hahafeno ny fepetra takian'ny lalànan'ny fandriana.
Latabatra kely farafahakeliny birao fitahirizam-boky latabatra fanaovana latabatra fanoratana latabatra latabatra latabatra latabatra sy latabatra fandoro miaraka amin'ny seza
Handuan ao amin'ny No.19, Kangtai South Road, block B, Shatou Industrial Park, Jiujiang Town, Distrikan'i Nanhai, Foshan City vokatra lehibe latabatra latabatra minimalista kely fanaovana latabatra feno latabatra fanoratana latabatra latabatra latabatra latabatra latabatra latabatra latabatra an-trano sy latabatra fandoro miaraka. Foshan Handuan Furniture Co., Ltd. dia mampiasa kalitao avo lenta ho fitaovana lehibe. Ny vokatra dia mampiseho ny fahamendrehana tadiavina. Ny fonenany mafy orina dia mampiasa singa avo lenta sy fitaovana insulation mba hisorohana ny fahatairana. Ny Handuan antsika dia azo novokarina tamin'ny endrika famolavolana sy ny famaritana isan-karazany.